Warfaafinta Puntland oo ka hadashay go?aankii lagu joojiyey howlihii SNTV ee gobolka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Warfaafinta Puntland oo ka hadashay go?aankii lagu joojiyey howlihii SNTV ee gobolka (Dhegeyso)
Agoosto 21, 2013 7:37 b 0
Garoowe, August 21, 2013 – Wasaarada warfaafinta ee Puntland ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay go?aankii dowladda Puntland ay ku joojisay howlihii shaqo ee howl-wadeenada warbaahinta dowladda federaalka.
Wasiirka warfaafinta ee Puntland Axmed Sheikh Jaamac ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay go?aankaas, wuxuu ku tilmaamay mid leh sababo badan, iyadoo ay socdaan baaritaano la xiriira sababta xiritaanka keentay.
Mudane Abwaan Axmed Sheikh Jaamac wuxuu shaaca ka qaaday in ay soo dhamaadeen baaritaano lagu hayey shaqada ay weriyaasha TV-ga iyo idaacada Dowladda ay ka hayaan deeganada Puntland, arrintaas ayaa daba socota go?aan ka soo baxay Puntland.
Wasiirka warfaafinta Puntland waraysiga ay la yeelatay idaacada Daljir wuxuu ku sheegay in uusan wax sharaxaad dheeraad ah ka bixin doonin go?aanka ay ku joojiyey shaqada warbaahinta dowladda, wuxuunta arintaas ku tilmaamay in ay war la wadda ogyahay ka soo saari doonaan.
Masuuliyiin ka tirsan wasaarada warfaafinta ee dowladda federaalka ah ayaa haatan ku soo fool leh deeganada Puntland ilaa 25 August ee aynu ku jirno, kuwaasi oo maamulka kala arinsan doona sababta loo xiray howlihii shaqada weriyaasha TV-ga iyo idaacada Dowladda.
Ugu dambeyntii wasaarada warfaafinta ee Puntland waxay sheegtay in howl-wadeenada SNTV ay ka gudbeen xudduudi saxaafada, iyadoo arintaasi ay u muuqato mid ay si ula kac ah ugu bareereen ku dhaqaaqida arrimaha ay ku eedeysan yihiin oo la shaacin doono.
Dhegeyso wasiir Axmed Sheikh oo u waramay Cabdiweli Sheikh oo daljir ka tirsan.
Guddi ay horkacayso wasiirka adeegga bulshada ee Soomaaliya oo weli ku mashquulsan baaris kufsi
Bisha Cas ee Turkiga oo in ka badan 3700 oo qoys maanta raashin ugu qeybisay Kismaayo (Dhegeyso)